အီစတာအားလပ်ရက်များသည်မိသားစုနှင့်အတူရက်အနည်းငယ်နေရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ များစွာသောအားဖြင့်အားသာချက်ယူတဲ့ရက်စွဲ သင်၏ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုထပ်မံအတည်ပြုပါ။ အခြားသူများကအဆက်ပြတ်ရန် "ချိုး" အနည်းငယ်ယူနေစဉ်။
3 Castile နှင့် Leon
4 Valencian အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အီစတာအားလပ်ရက်များ
5 ကာ့စ်တီ, La Mancha
ဒါဟာ Galicia ဖြစ်ပါတယ် စပိန်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာများထဲကတစ်ခု အီစတာအားလပ်ရက်များအတွင်းလည်ပတ်ရန်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စန်တီယာဂိုက de Compostela။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏မြို့တော်မှာယူနက်စကို၏ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှစ၍ လူသားမျိုးနွယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။
Es ကမ္ဘာပေါ်ရှိခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအနက်အလည်ပတ်ဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ရောမမြို့နောက်သို့သာ လိုက်၍၊ Santiago el Mayor ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘာသာရေးသာမကဗိသုကာဆိုင်ရာများပါစိတ် ၀ င်စားစရာအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၏သွက်သွက်လက်လက်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းသည်နွေ ဦး ရာသီနှင့်အီစတာတွင်ကြွင်းသောနေ့ရက်များတွင်များစွာကမ်းလှမ်းရန်ရှိသည်။ ၎င်း၏မြို့ကြီးများနှင့်မြို့များ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာသည် Iberian ကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးတွင်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများစွာကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအပြင်
Andalusia ၏မြို့တော်ကြီး၏ရက်သတ္တပတ်ပတ်လည်အစဉ်အလာသည် Ibero-America တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။။ ၎င်း၏လမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများမှတဆင့်စီတန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်အများကြီး နိုင်ငံတကာခရီးသွားအကျိုးစီးပွား.
Seville ၏သမိုင်း ၀ င်စင်တာသည်သူ့အားမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီတလီဗင်းနစ်နှင့်ဂျီနိုအာနောက်တွင်၎င်းသည်တိုက်ကြီးဟောင်းတွင်တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ တူသောဂန္ထဝင်အော်ပရာများ Figaro ၏အိမ်ထောင်ရေး y Don giovanni မိုဇတ်ကဤမြို့တွင်သတ်မှတ်သည်။
မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ကျောက်ချရပ်နားသည်။ မလagaသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားစရာအချက်အလက်များကျယ်ပြန့်စွာရှိသည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဘီစီ ၇ ရာစုမှဖိုနီးရှားတို့ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဥရောပရှိရှေးအကျဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာသည်။
အီစတာအားလပ်ရက်များ၌လမ်းများသည်ချီတက်ပွဲများနှင့်စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုမှာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဖြစ်သည် စိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည် သန့်ရှင်းသောတနင်္လာနေ့။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းဖြစ်ပါက၊ Granada သည် Andalusia နှင့် Spanish တို့တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမည်မသိပြည်နယ်၏မြို့တော်၎င်း၏အနီးအနား၌တည်ရှိသည် Sierra Nevada နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း။
ဒါပေမယ့်တကယ်ထူးခြားတာက၊ က၎င်း၏ဗိသုကာဆောက်လုပ်ရေးအဘို့ဖြစ်၏။ ထိုစာရင်းတွင် Alhambra၊ Generalife ဥယျာဉ်၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါဘုရားကျောင်းနှင့် Puerta de Fajalauza တို့ပါဝင်သည်။ Granada ၏လူ့ဇာတိခံယူထားသည့်သန့်ရှင်းသော Metropolitan ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုစပိန်တွင်ပထမဆုံးသော Renaissance အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စာရင်းဝင်သည်။
Granada သည်အီစတာတွင်သာမကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက်ပြသရန်အတွက်ပြတိုက်များစွာကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်။ သိပ္ပံပန်းခြံနှင့် Granada ၏အနုပညာပြတိုက်တို့ထင်ရှားသည်။ Federico García Lorca စင်တာသည်ဤ Andalusian မြို့တွင်အခြေစိုက်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း စပိန်တွင်အကြီးဆုံး တိုင်းပြည်၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏ ၆၀% ကိုစုစည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည်ယူနက်စကိုမှယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး ၁၈၀၀ မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ ပြတိုက် ၄၀၀ အပြင်ရဲတိုက်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးအနုပညာအနုပညာအမျိုးမျိုးကိုပါပြသခဲ့သည်။
Valladolid မှ ရင်ပြင်များ၊ ရဲတိုက်များ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်ပန်းခြံများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောမြို့ဟောင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ချစ်မိသွားသည်။ ထို့အပြင်ကြီးမားသောပြတိုက်စာရင်းသည် to ည့်သည်များရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။ Cervantes အိမ်ပြတိုက်အပြင်အမျိုးသားပန်းပုပြတိုက်နှင့်အရှေ့တိုင်းပြတိုက်တို့ထင်ရှားသည်။
မြို့တော်သည်အီစတာအားလပ်ရက်များ၌အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည် ဘာသာရေးအစဉ်အလာ။ လူအများစုက၎င်း၏လမ်းများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်အလွန်အမင်းသစ္စာရှိမှုဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်ဟုယူဆကြသည် ခရစ်တော်၏စိတ်အားထက်သန်မှု.
၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအိတ်များအားနဂိုအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားသောနောက်ထပ်မြို့တော်တစ်ခု။ Salamanca (Old City) မြို့တော်ဟောင်းသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်ယူနက်စကိုမှယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
Semana မြို့တော်ဝန်မှာမြို့ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ၂၂ ခုကိုညီအစ်ကိုအသင်းအပင်း ၁၆ ယောက်ကတာဝန်ယူထားတယ်။ အများဆုံးဒီကဗျာဟာသူတို့ဖြစ်ကြသည် အဆိုပါနွယ်ဖွား၏အက်ဥပဒေ နှင့် သန့်ရှင်းသောသင်္ချိုင်း၏စီတန်း။
ယခင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများအတွင်းတွင် Semana မြို့တော်ဝန်နှင့်အတူရောက်ရှိလာသည့်ရက်များအတွင်းသွားရောက်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဤဒေသတွင်မြေထဲပင်လယ်နှင့်နီးကပ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရောထွေးနေပါသည်.
နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဖြစ်သောသမိုင်းဝင်စင်တာတွင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အကြား, အဆိုပါ Serranos ၏မျှော်စင် သို့မဟုတ် ပိုးစျေးကွက်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်။ 1996 ။
ဗလင်စီယာတွင်သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံမြို့၊ Oceanográfic၊ Bioparc Valencia၊ ပြတိုက်များ၊ ကမ်းခြေများနှင့်အခြားအရာများမှမြင်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။
အဖြစ်လူသိများ မြေထဲပင်လယ်၏နယူးယောက်။ နေနှင့်ပင်လယ်ရှာဖွေရေးအတွက် Valencian Community သို့လာသူများအတွက်လိုအပ်ချက်။ ဤသေးငယ်သောကမ်းရိုးတန်းမြို့တော်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်သူတစ် ဦး လျှင်မိုးမျှော်တိုက်များအများဆုံးနှင့်စတုရန်းမီတာလျှင်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးမြို့၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ Big Apple သာလျှင်နောက်တွင်ရှိသည်။
Benidorm သည်ကမ်းခြေများနှင့်အဆောက်အအုံကြီးများမျှသာမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါဖျော်ဖြေရေးကမ်းလှမ်းမှုကဲ့သို့သော Terra Místicaပန်းခြံကဲ့သို့သောဆွဲဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ လူကြီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များပျော်ရွှင်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနေရာ။ မိမိအ roller Coaster သတ္တိအဘို့ဖြစ်၏။
ကာ့စ်တီ, La Mancha
Castilla la Mancha နှစ်စဉ်အချိန်မရွေးရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများနှင့်အီစတာပွဲများလည်းပြည့်နှက်နေသည်။
La Cuenca အတွက်သန့်ရှင်းသောအပတ် ၎င်းကိုမြို့၏ရှေးဟောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၎င်း၏စီတန်းလှည့်လည်မှုများဖြင့်လူသိများသည်။ သောကြာနေ့ကောင်းသောသောကြာနေ့အရုဏ်တက်ချိန်၌ Camino del Calvario နှင့်ထင်ရှားသည် ရိုးရာလူအုပ်စု(မျိုးဆက်မှမျိုးဆက်သို့ကူးပြောင်းသွားပြီ) Cuenca ၏ဘာသာရေးဂီတသီတင်းပတ်သည်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထဲမှာ Toledo ရှိအီစတာ တိတ်ဆိတ်မှု၊ မြို့၏ကြီးမားလှသည့်အလှအပနှင့်ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းအရေအတွက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် Mozarabic နိုက်နှင့်မင်းသမီး.
ကျွန်တော်မှရောက်နေတယ်ဆိုရင် Hellín၊ လူသိများသော Pasos နှင့် La Tamborrada၎င်းတို့သည်ယဉ်ကျေးမှု၊
En တိုဘာရာ (Albacete), သူတို့က အသံမြည်ထောင်ပေါင်းများစွာ နာရီပေါင်းများစွာ၏သင်တန်းကျော်။
Ciudad Real မှ Calzada de Calatravaခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူနှစ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်"မျက်နှာများ၏ဂိမ်း", ယေရှုခရစ်၏တင့်တယ်ခြင်းအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်၊ "Armaos" ၏ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းများသည် ၁၆ ရာစုတိုင်အောင်သူတို့၏ရောမနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများဖြင့်ထင်ရှားကြသည်။
ပုံရင်းမြစ် - အခန်း ၅ / Cadena ဆာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » စပိန်နိုင်ငံရှိအီစတာအားလပ်ရက်များ
ဆောင်း ဦး ရာသီ 2018 စုဆောင်းမှုအတွက်ပါးပျဉ်းချွေးထွက်အင်္ကျီကိုပေါင်းစပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှု